Sony Xperia miro ST23i ကို root လုပ်နည်း | IT Sharing Network
Sony ST23i Root လုပ်နည်းလေးကို Cbox က အကိုတစ်ယောက်မေးထားလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ လည်း ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါခင်ဗျာ။ အားလုံးအတွက်တင်ပေးတာပါ။
sony xperia miro ကို root လုပ်ဖို့ ကအရင်ဆုံး
ဒီဖိုင်လေးနဲ့အရင်ဆုံး Root ကြည့်ပါ
Settings->Developer Options-> USB Debugging..
Settings->Security->ceklis Unknown Sources
Settings->Xperia->Connectivity->USB Connection Mode-> MSC ပြောင်းပေးပါ။
ရလာသော zip ဖိုင်လေးထဲက
bat ဖိုင်လေး run ပြီး
1 enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းညာဖက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ select Restore! let it reboot .. ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Restart နှစ်ကြိမ်လောက်ကျမှာပါ ။ ပြန်တတ်လာရင်တော့ Root ရပါပြီ။
အပေါ်ကနည်းလေးနဲ့မှမရရင် အောက်မှာ နောက်တစ်နည်းတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
unlock bootloader လုပ်ထားရပါမယ် unlock bootloader လုပ်နည်းကို ဒီဆိုက်ကလေးမှာလေ့လာလိုက်ပါ။
ဖုန်းရဲ့ခေါ်တဲ့နံပါတ်မှာ *#*#7378423#*#* ပြီးရင် Service info > Configuration > Rooting Status
If Bootloader unlock allowed says Yes ဒီလိုလေးပေါ်နေရင် unlock လုပ်လို့ရပါတယ်။
If Bootloader unlock,yes ဒါမျိုးလေးဆို လုပ်ပြီးပါပြီ။
unlock လုပ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို root ကြမယ်ပေါ့ဗျာ။
Menu>>Settings>>Applications>>Development>>USB debugging ကို On ပါ။
Unkown source ကိုလည်း on ပေးပါ။
ဒီဖိုင်လေးနဲ့အရင်ဆုံး Root ကြည့်ပါ.
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို ဖြည်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ Driver တော့သွင်းထားအုံးနော်။ ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို သိသွားပြီးဆိုရင်တော့ ဖြည်ထားတဲ့ zip ဖိုင်ထဲက 01-local - စာတန်းကိုဖွင့်ပါ ပြီးရင် enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် root လုပ်ဖို့ အတွက်4ကိုနှိပ်ပြီး
enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် 02-push-root...စာတန်ကိုဖွင့်ပါ ပြီးရင် enter နှိပ်ပါ ပြီရင် env စာတန်ကိုဖွင့်ပြီး enter နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် root လုပ်လို့ မပြီးသေးပါဘူး
Unlock Root နဲ့ဆက်ပြီး Root လုပ်ပါ။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။
မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်လေးက လေ့လာပါခင်ဗျာ။